नेपालको समय: ०४:१८ | UK Time: 23:33
एनआरएनए आइसीसीले तोक्यो विशेष साधारणसभा मिति
लन्डन । गैर आवासीय नेपाली संघ, अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद (आइसीसी) ले बेलायत राष्ट्रिय समितिलाई विशेष साधारणसभा गर्न मिति तोकेको छ । आइसीसी महासचिव कुमार पन्तले एनआरएनए यूके महासचिव योगकुमार फगामीको नाममा २६ जनवरीमा इमेल...
चाल्टर्न समाजद्वारा सल्लाहकारहरु सम्मानित
लन्डन । साउथ इष्ट लण्डनको चार्ल्टन निवासी नेपालीहरुको साझा सामुदायिक संस्था चार्ल्टन नेपाली समाजले नव नियुक्त सल्लाहकारहरुको सम्मान गरेको छ । गत आइतवार स्थानीय मेरिडियन स्पोर्ट्स क्लबमा आयोजित एक कार्यक्रमबीच उनीहरुलाई अध्यक्ष रोमनाथ पाण्डे तथा कार्यसमिति...
विपक्षी गठबन्धनको आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक
काठमाडौं। एकीकृत नेकपा माओवादी नेतृत्वको ३० दलीय मोर्चाले संविधान निर्माणका लागि बहुमतीय प्रक्रिया सुरु गरेको विरोधमा आन्दोलन घोषणा गरेको छ। एमाओवादीको संसदीय दलको कार्यालयमा भएको मोर्चाको बैठकले आन्दोलनको पहिलो चरणअन्तर्गत एक महिनाभन्दा लामो संघर्षको कार्यक्रम...
प्रस्ताव निर्माण समितिको बैठक शनिबार
काठमाडौं। विवादबीच संविधानसभाले आइतबार गठन गरेको ‘प्रस्ताव निर्माण समिति’ को पहिलो बैठक शनिबार बस्ने भएको छ। पहिलो बैठक सभाध्यक्षले बोलाउने नियमावलीको व्यवस्थाअनुरूप शनिबार दिउँसो १ बजे समितिको बैठक बोलाइएको हो। समितिमा विपक्षी मोर्चाबाट...
तेश्रो मिस्टर यूके नेपाल १९ जुलाईमा, ज्यान हुनेलाई अवसर
लन्डन । यूके नेपाल फेडेरेसन अफ बडी बिल्डिङ एण्ड फिटनेशले तेश्रो मिस्टर यूके नेपाल च्याम्यिनसीप यस वर्ष १९ जुलाई २०१५ मा गर्ने निर्णय गरेको छ । फेडेरेसनको दोश्रो कार्यसमितिको आइतबार गोर्खा प्यालेस् रेष्टुरेन्ट फार्नबोरोमा सम्पन्न...
युएईमा बितेका धामीलाई सहकर्मीहरुबाट नौ लाख सहयोग
अबुधाबी । गत १३ डिसेम्बरमा हृदयाघात भई मृत्यु भएका दीपेन्द्रसिंह धामीको परिवारलाई आर्थिक राहतस्वरुप सोही कम्पनीका साथीहरुले ९ लाख दस हजार नेपाली रुपैयाँ सहयोग संकलन गरेका छन् । दार्चुलाको मालिकार्जुन-८ बाट १४ महिनाअघि यूएई...
लन्डनमा तामाङ सामाज यूकेको ल्होछार
लन्डन । तामाङ सामाज यूकेले एक समारोहबीच तामाङ जातीको महान सांस्कृतिक पर्व एवं नयां वर्ष २८५१ लुक सोनाम ल्होछार मनाएको छ । गत २५ तारिख आइतबार सांझ ओकिङ्टन म्यानर हल, स्टोनब्रीजमा भव्य समारोहबीच ल्होछार...
प्रवासी मंचको कार्यक्रममा भाग लिन युके अाइपुगे डा. पौडेल
लण्डन । प्रवासी नेपाली मञ्च यूकेको १० औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा भाग लिन नेकपा एमाले पोलिटब्यूरो सदस्य तथा अर्थशास्त्री डा. विजय पौडेल लण्डन आइपुगेका छन् । उनलाई मञ्चका अध्यक्ष रामशरण सिम्खडा, संस्थापक अध्यक्ष आङकल्जंग लामा, उपाध्यक्ष रवीन्द्र कंडेल, सचिव...
कसरी अघि बढ्छ वहुमतीय प्रक्रिया?
काठमाडौं। प्रमुख दलहरुबीच नयाँ संविधानको अन्तर्वस्तुको बारेमा सहमति जुट्न नसकेपछि सत्तारुढ दलहरुले संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितीबाट सोझै मस्याैदा समितिमा प्रतिवेदन पठाउन चाहेका थिए। तर विपक्षी दलहरुले भने सहमतिकै आधारमा नयाँ संविधानको निर्माणमा...
होहल्लाबीच प्रस्ताव समिति गठन
काठमाडौं। एकीकृत नेकपा माओवादी नेतृत्वमा रहेको गठबन्धनको विरोधका बाबजुत संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले आइतबार प्रस्ताव समिति गठनको घोषणा गरेका छन्। एकीकृत माओवादी र मधेसवादीसहित १९ दलीय विपक्षी मोर्चाका सभासदको होहल्लाबीच नै सभाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले...
बेलायतवासी तामाङ जातीले मनाए ल्होछार
लन्डन । बेलायतवासी तामाङ जातीले आफ्नो महान पर्व ल्होछार मनाएका छन् । उनीहरुले २८५१ सोनाम ल्होछार (भेडा वर्ग) मनाएका हुन् । सांस्कृतिक पर्व ल्होछार एवं नयां वर्ष गत २१ तारिखका दिन परेपनि कार्यव्यस्तताले सप्ताहन्तमा...
बेलायतमा स्वास्थ्य सचेतना कार्यक्रमको तयारी
लन्डन । बेलायतवासी नेपालीहरुलाई स्वास्थ्य सम्बन्धि जानकारी दिन यहां वृहत स्वास्थ्य सचेतना कार्यक्रम हुने भएको छ । हार्ट फाउण्डेशनको अगुवाइमा स्वास्थ्यसंग सम्वन्धित विभिन्न संघसंस्थाहरु नेप्लिज ब्ल्ड डोनर्स एसोसिएसन यूके, नेप्लिज नर्सिङ एसोसिएसन यूके र नेप्लिज डक्टर एसोसिएसन यूके मिलेर आगामी मार्च...
« अघिल्ला 1 … 1,142 1,143 1,144 1,145 1,146 … 1,212 पछिल्ला »